Monday January 10, 2022 - 12:25:18
Anteenada shirkada Safaricom ee Cumar Jilacow
Wageyska The Star ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa soo daabacay warbixin uu diiradda ku saarayo weeraradii ugu dambeeyey ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ka geysteen gobolka N.F.D ee ku hoosjira gumeysiga dowlada Kenya.
Ciidamada Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka NFD ayaa mowjado weeraro ah todobaadyadan ka fuliyey deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka, taas oo sababtay in walaac amni oo aan la dhayalsan karin lasoo derso dowlada Kenya.
Mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyey wuxuu ahaa, howlgal ay ciidanka Al-Shabaab ka fuliyeen deegaanka Cumar Jilacow kaas oo lagu kala ceyriyey ciidamadii Kenyaatiga ee ku sugnaa tuulada, islamarkaana lagu burburiyey anteenadii shirkada isgaarsiinta ee Safaricom.
Wargeyska Star oo soo xiganayo dad deegaanka ah ayaa sheegaya, in dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay deegaanka gaafwareegayeen ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab oo kuwaas oo si caadi ah ula tacaamulayey dadka deegaanka, kadibna ay ugu dambeyntii ay weerar ku soo qaadeen deegaanka.
Saraakiisha ciidamada Police ee dowlada Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay dhaq-dhaqaaq ciidan oo xoogan ka wadaan deegaanka, islamarkaana ay taageero ballaaran ka heleen dadka deegaanka sida uu hadalka u dhigay.
Sarkaal diiday in magaciisa la shaaciyo oo katirsan hay'adaha Amniga ayaa sheegay in dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ay kusoo biireen sufuufta Al-Shabaab kuwaas oo qaarkood tababaro lagu siiyey gudaha Kenya si toos ahna hadda uga qeyb qaadanaya dagaalada ka socda deegaanka iyo kuwo kale oo lagu soo tababaray Soomaaliya oo dib ugu soo noqday gobolka kuna biireen safka al-Shabaab.
Afar weerar oo kala duwan ayaa todobaadyadan ka dhacay gobolada Lamu iyo NFD, kuwaas oo lagu dilay ugu yaraan 12 ruux marka la eego inta uu Kenyaatigu qirtay.
""Weerarradii ugu dambeeyay waxaa fuliyay unugyo qarsoon oo katirsan AlShabaab ah. Hawlgalladan jihaadiga waa kuwo qorshaysan oo ay fuliyaan dagaalyahano kasoo jeeda deegaanka oo garab ka helaya unugyo tababaran oo AlShabaab ah.” sidaas waxaa yiri mid ka mid ah saraashii ciidanka Kenya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay inay jirto aragti ay ka mideysan yihiin dadka kunool waqooyi bari Kenya iyo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah in la galo halgan ka dhanka ah dowlada Kenya oo ay u arkaan mid gumeysi doon ah.
Dowlada Kenya ayaa kooxo kala duwan oo ka kala tirsan police, military-ga, argigixiso la dagaalanka iyo laamaha sirdoonka kusoo daabushay gobolada Lamu, Wajeer, Gaarisa iyo Mandhera si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab laakiin ilaa hadda weli cutubyadaas kuma guuleysan inay joojiyaan ama xitaa yareeyaan weerarada ay Xarakadu ka geysato goboladaasi.
Xoolo ku baaba'ay Shil ka dhacay deegaan katirsan gobolka Bari.